प्रजातन्त्र छ, प्रत्याभूति छैन
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिप्रजातन्त्र छ, प्रत्याभूति छैन
प्रजातन्त्र दिवसका दिन कन्टिर–बाबू हातले चिउँडो समाएर घुँडामा कुहिनो अड्याउँदै दिनभर सोचमग्न रहे । उनी लामो समयदेखि एउटा विशेष जिज्ञासाले घेरिएका छन् । त्यही जिज्ञासाको सेरोफेरोमा रहेर उनी प्रजातन्त्र दिवसका दिन थप गम्भीर बनेका हुन् ।
देशमा कहिले प्रजातन्त्र आयो भनियो, कहिले लोकतन्त्र भनियो, कहिले गणतन्त्र भनियो । त्यतिले नपुगेर अझ के–के तन्त्र थप्ने कुरा गरिँदै छ । तर तन्त्र जे सुकै भनिए पनि तन्त्रमा निहित मन्त्रले भनेअनुसारको काम गरेको देख्न पाइने दिन भने कहिल्यै आएन ।
राजनीतिक शब्दकोशमा तन्त्रको शब्द परिवर्तन गरे पनि जनताको जीवन स्तरमा के–कति परिवर्तन आयो ? कन्टिर–बाबू जति–जति सोच्छन्, उति–उति उनको दिमाग खराब हुन्छ । नामको मात्र प्रजातन्त्र भएको देख्दा असन्तुष्टि चुलिन्छ ।
हो, जनता रैतीबाट औपचारिक रूपमा नागरिक बन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हो र यसमा २००७ साल फागुन ७ को दिनले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको थियो भन्ने कुरामा कन्टिर–बाबूमा कुनै द्विविधा छैन । तर कन्टिर–बाबू गम्भीरं भएर सोच्छन्– अरे यार यस्तो ध्रुवसत्य कुरामा पनि राजनीति ? फागुन सातका बारेमा पनि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टको दृष्टि र संलग्नताका आधारमा विश्लेषण किन ? निकै भइसक्यो, कन्टिर–बाबूले यस प्रश्नको उत्तर खोजेको तर उनले यसको जबाफ त परै जाओस्, भेउसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
कन्टिर–बाबूको स्पष्ट मत छ, अहिले भन्ने गरिएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदि–इत्यादि सबै तन्त्रको आधारभूमि भनेको त्यही सात साले प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्रले आफैँले आफैँलाई निरन्तर सच्याउँछ, प्रभावकारी र विकसित बनाउँछ । त्यसैले, यो कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ कि सात साले प्रजातन्त्रले आफूलाई विकसित गर्दै आजको गणतन्त्रको अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याएको हो ।
एउटा कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ङ छ, नेपाली प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रले लामो अवधिका लागि कुनै प्रकारको प्रतिगमनलाई अस्वीकार गर्छ । कसैले पनि फुर्ती लाउनु जरुरी छैन ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्– हिजो राणाजी, शाहजी, अरूजीहरूको कालखण्ड नेपालीले भोगेकै हुन् । आज ओल्बाजीहरूको समयको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । मूल प्रश्न जनताको अधिकार, स्तन्त्रता र सुशासनसँग सम्बन्धित छ । यसविरुद्ध जाने सबै सिद्धिन्छन्, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदि जुनसुकै आवरणमा छोपिन खोजे पनि ।
साँचो अर्थमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि हाँसी–हाँसी जीवन समर्पण गर्ने सबैप्रति कन्टिर–बाबूको विशेष सम्मान र नमन छ ।
गणतन्त्र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र